प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा छैन ढल निकास , नाक थुनेर उपचार गर्न बाध्य चिकित्सक, दुर्गन्धले रोग थपिने चिन्ता - Kendra Khabar
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा छैन ढल निकास , नाक थुनेर उपचार गर्न बाध्य चिकित्सक, दुर्गन्धले रोग थपिने चिन्ता
२०७५, १४ मंसिर शुक्रबार ०७:५४
गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ढल व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ । अस्पतालबाट निस्केको ढल प्रांगणमै छरपस्ट हुँदा बिरामी, बिरामीका आफन्त, चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी नाक थुनेर काम गर्न बाध्य छन् ।
दाँतको उपचार गर्न स्याङ्जाबाट पोखरा आएकी सुशीला पौडेलले अस्पताल जस्तो स्थानमै दुर्गन्धले नाक छोप्नु परेको दुखेसो गरिन् । डाक्टरलाई कुरुन्जेल पनि समस्या भएको उनले बताइन् । ‘अस्पतालको दुर्गन्धले रोग थपिएला भन्ने पो भो,’ उनले भनिन् । अस्पतालमा दैनिक १२ सयभन्दा बढी बिरामीले स्वास्थ्य जाँच गराउँछन् । त्यतिकै मात्रामा उनीहरूका आफन्त आउँछन् । अस्पतालको दुर्गन्धले यी सबै पीडित बन्ने गरेका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक आर्जुन आचार्यले अस्पतालको ढलको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको स्विकारे । ढल व्यवस्थापनकै लागि ट्यांकरलाई वार्षिक ५ लाख दिने गरेको अस्पताल प्रशासन स्रोतले बतायो । ‘निकाल्यो भरिइहाल्छ, निकै समस्या भएको छ, ट्यांकरलाई कति पैसा बुझाउने ?, समस्याको दिगो समाधानका लागि गम्भीर छौँ,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने । अस्पतालबाट निस्कने बाहिरी (ठोस) फोहोर भने पोखरा महानगरको फोहोरमैला विभागसँगको सम्झौताबमोजिम काम भइरहेको छ ।
शय्या बढ्यो, तर पूर्वाधार बढेन
अस्पताल स्थापनाकालमा ५० शय्याका लागि बनाइएको ढल र सेफ्टी ट्यांकीलगायत संरचना पाँच सय शय्या को हुँदासमेत विस्तार भएको छैन । अस्पतालको हाल पाँच सय शय्याको भइसकेको छ । ३ सय ८० शय्या पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा बिरामी, बिरामीका आफन्त, चिकित्सिक, नर्स र कर्मचारीसहित दैनिक १० हजारको आउजाउ हुने निर्देशक आचार्यले बताए । त्यसका लागि यहाँ दैनिक करिब २ लाख लिटर पानी प्रयोग हुन्छ । ‘पानीको अभाव छैन, अस्पतालभित्र अन्य सरसफाइ पनि सहज र सरल छ तर ढलको निकास नहुँदा समस्या परेको सत्य हो,’ निर्देशक आचार्यले भने । २ सय ७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अस्पतालमा ढल निकासको कुनै माध्यम नरहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापाले बताए । उनले सुरुमा थोरै भौतिक संरचना हुँदा बनाएका सेफ्टी ट्यांकीले धान्न नसकेको जानकारी दिए ।
‘पुनर्निर्माण र ढल निकास सँगै गर्छौँ’
६ दशकअघि निर्माण भएको अस्पतालका भवनहरू ०७२ मा गएको भूकम्पले जीर्ण बनेका छन् । जीर्ण अवस्थाका भवनलाई नयाँ स्वरूप दिन अस्पताल प्रशासनले रेट्रो फिटिङको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत बेलायती संस्था डिएफआइडी (डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट) ले मर्मत सम्भार गरिदिने सहमति भएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. अचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक टेन्डर प्रक्रियामा लगिसकेको छ ।
प्रतिष्ठानको पुरानो भवनलाई रेट्रो फिटिङ गरी पुनर्निर्माण गर्ने टेन्डर प्रक्रियामा छ । डिएफआईका इन्जिनियर सुनील खड्काले ५५ करोडको लागतमा अस्पताल रेट्रो फिटिङका लागि डिपिआर तयार भएर टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले नयाँ संरचनामा ढल निकासदेखि सबै पूर्वाधार समेटिएको प्रस्ट पारे ।
०१२ सालमा स्व. वीरसिंह गुरुङले सोल्जर्स बोर्ड अस्पतालको रूपमा अहिलेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुरुवात गरेका हुन् । सो अस्पताललाई ०१९ सालमा जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरण भयो । ०३२ सालमा अञ्चल अस्पताको रूपमा परिणत हुन पुग्यो । त्यसपछि क्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण हुँदै १६ जिल्लाको मुख्य अस्पतालका रूपमा परिचित पश्चिमाञ्चल यो अस्पताल ०७१ सालमा पाँच सय शय्या क्षमताको स्वीकृति प्राप्त भएको होे ।